A gam akporo 10 melite ugbu a na Nokia 4.2 | Gam akporosis
Gam akporo 10 melite ugbu a na Nokia 4.2
Ọzọ mmefu ego smartphone na-enye gam akporo 10 melite ezigbo nnabata, ọ bụ ya Nokia 4.2, mobile nke emere na February nke afọ gara aga site na sistemụ arụmọrụ Android Pie dabere na mmemme Google's Android One.
Juho Sarvikas, onye isi ahia nke HMD Global, na-ahụ maka ibipụta akwụkwọ a site na akaụntụ Twitter ya, nke ejirila nwayọọ nwayọọ tinye n'ọrụ site na OTA na mpaghara ụwa niile nke ihe nlereanya yana uru niile gam akporo 10 nwere onyinye.
Na mgbakwunye na itinye ụdị mmezi nke obere ahụhụ, njikarịcha dị iche iche, na ndozi ndozi usoro, ngwungwu ọhụụ ọhụrụ ahụ na-abata maka nrụpụta Nokia 4.2. ọhụụ ọhụrụ dị na gam akporo 10 dịka ọnọdụ abalị zuru oke ma zuru ezu.
Ndị nwe Nokia 4.2, ngwaọrụ gị ka mma karịa! Nwere ike imelite ihe gam akporo 10 site na iji atụmatụ ọhụụ ọhụụ dị! Lelee ebe a maka nkọwa ndị ọzọ na nnweta na mba dị iche iche?https://t.co/l9lt6bOcQv@nokiamobile # Android10 # Nokia4dot2 pic.twitter.com/ni6Im40UwP
- Juho Sarvikas (@sarvikas) April 9, 2020
Mba izizi edepụtara iji nweta OTA na ebili mbụ, dịka ụlọ ọrụ ahụ si kọọ, bụ ndị a:
France (ma e wezụga Oroma FR)
10% nke ahịa ndị a akwadoro na-enweta mmelite ahụ kemgbe ụnyaahụ. 50% ga-eme ya tupu Eprel 12, mgbe 100% nke ahịa ndị a kwadoro ga-anatala gam akporo 10 site na 14 nke ọnwa a.
Nokia 4.2 bụ ekwentị mkpanaaka bịara na ihuenyo IPS LCD 5.71-inch na HD + mkpebi. SoC nke na-enye ya ike bụ Qualcomm's Snapdragon 439, chipset asatọ nwere isi na nke a na-ejikọta 2/3 GB RAM na 16/32 GB n'ime ebe nchekwa. Batrị ya bụ 3,000 mAh, n'otu oge nke igwefoto 13 + 2 MP n'azụ na 8 MP n'ihu shooter na-akwado ibe ha maka ịse foto.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Gam akporo 10 melite ugbu a na Nokia 4.2
Galaxy S21 ga - abụ igwe izizi nwere igwefoto agbakwunyere n'okpuru ihuenyo
Mate Xs mpịachi ama ama kpatara ọnwụ nke nde dollar 60, ka Huawei kwuru